दरबन्दीका डाक्टर नहुँदा उपचार सेवा प्रभावित – इन्सेक
उदयपुर ०७३ भदौ १८ गते
जिल्ला अस्पतालमा दरबन्दीअनुसारका चिकित्सक नहुँदा उपचार सेवा प्रभावित बन्दै आएको छ । विशेषज्ञसहित १४ जना दरबन्दी रहेको अस्पतालमा दुई जना चिकित्सक मात्र उपस्थित हुँदा बिरामीको उपचार प्रभावित बनेको हो ।
अस्पतालमा मेडिकल सुपरिटेण्डेण्ट तथा जनरलिष्ट अधिकृत डा. विष्णुबहादुर बस्नेत र मेडिकल अधिकृत डा. विशालकुमार देव मात्र रहेको अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ । बस्नेत कार्यालय प्रमुखसमेत भएकाले प्रमुखका हैसियतमा थप काम गर्नुपर्ने भएकाले बिरामीको उपचारमा थप समस्या भएको हो ।
२०७० सालबाट ५० शैयाको बनाइएको अस्पतालमा तोकिएको दरबन्दी मध्ये एक दर्जन चिकित्सक दरबन्दीको पदपूर्ति हुन नसकेको अस्पतालका प्रमुख डाक्टर बिष्णुबहादुर बस्नेतले बताए । अस्पतालमा हालसम्म प्रमुख मेडिकल अधिकृत, कन्सल्टेण्ट जनरल फिजिसियन अधिकृत, कन्सल्टेण्ट अब्स एण्ड गाईनो अधिकृत, कन्सल्टेण्ट अर्थोपेडिक सर्जन अधिकृत, पिडियाट्रिसियन अधिकृत, सर्जन अधिकृत, साईक्याट्रिष्ट अधिकृत र मेडिकल अधिकृत आठौं तहको दरबन्दी छन् । तर, कोही हाजिर हुन नआएको डा. बस्नेतले बताए ।
एनेस्थेसियामा कन्सल्टेन्ट एनेस्थेसियोलोजिष्ट अधिकृतसमेत नभएको प्रमुख डा. बस्नेतले बताए । यसैगरी डेन्टल शाखामा डेन्टल सर्जन अधिृकत र डेन्टल हाइजिनिष्ट सहायक हुनुपर्नेमा कोही छैनन् । दरबन्दी अनुसारको चिकित्सकको व्यवस्था गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पटक-पटक पत्राचार गर्दा पनि सुनुवाइ नभएको डा. बस्नेतको गुनासो छ ।
'स्थानीय तहबाट जाने दबाव मन्त्रालयले सुनुवाइ नगरेका कारण समस्या भएको हो ।'-अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष शिव रेग्मीले बताए । सरकारले आवश्यकता अनुसारको विशेषज्ञ सेवा व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । चाहेअनुसार विशेषज्ञहरू नहुँदा बिरामी पाउनु पर्ने सेवा नै दिन नसकेको डा. बस्नेतको भनाइ छ ।
दैनिक सरदर १ सय ५० जना बिरामी आउने गरेको अस्पतालमा चिकित्सककै अभावमा उपचार सेवा प्रभावकारी बनाउन नसकिएको अस्पतालका प्रमुख डा. बस्नेतको भनाइ छ । 'वार्ड र इमरजेन्सी गरी बिहान ८ बजेदेखि बिरामी चेक जाँचगर्दा गर्दै १०ः३० बज्छ ।'-उनले भने-'कति खेर खाना खानु, कति खेर ओपिडीको बिरामी जाँच गर्नु ।'